मंसिर २४, २०७६ ०७:१२:५१
कसिलो ब्रा लगाउनु हुन्छ? सावधान ! मंसिर २३, २०७६
निद्रा लाग्दैन ? सुत्नुअघि शरीरको यो भाग थिच्नुस् ! निद्राका विभिन्न प्रकार हुन्छन् र यसले मानिसलाई अनेकौं प्रकारले असर पार्छ । निद्रा बोलाउनका लागि केही मान्छे घन्टौंसम्म ओछ्यानमा यता र उता पल्टिन्छन् । ‘लौन, कुनै जादू मन्त्र पाएदेखि फुस्स निदाउँथें नि’ भनेर कल्पन्छन् यस्ता मान्छे । मंसिर ४, २०७६
जाडोमा स्वस्थ रहने ७ तरिका जतिजति चिसो बढ्दै जान्छ, उतिउति तपाईंको स्वास्थ्य सन्तुलित राख्न कठिन हुँदै जान्छ । जाडोमा स्वास्थ्य धेरैको चिन्ता र चासोको विषय हो । किनकि, बाहिरी वातावरणले गर्दा तपाईंलाई नियमित व्यायामको तालिका अनुसरण गर्न पनि चुनौती हुन्छ । त्यसैगरी घरमै बसिरहन मनलाग्छ र भोक पनि बढी लाग्छ । यस्तोमा स्वस्थ कसरी रहने त ? मंसिर ४, २०७६